Uptodate MM - Page 140 of 389 - Media and Entertainment
ရန် ကုန် ၌ စီဘီဘဏ်ဝန်ထမ်းများ အား သေ နတ်ဖြင့် ခြိ မ်းခြောက် ၍ ဘဏ် မှ ငွေ ကျပ် သိန်း(၆၀၀) ခန့် လု ယူ ထွ က်ပြေး သွား ခဲ့ သူ အား ဖမ်းဆီးရမိ
နေပြည်ေ တာ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၃၅)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း နှင့် အဏ္ဏဝါလမ်းသွယ်ထောင့် အမှတ်(၁၂၁၇)ရှိ စီဘီဘဏ်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ကာ ဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဝတ္ထုကို
မန္တေ လးမြို့ မှာ (၉) ရက် အ တွင်း မီးေ လာ င်မှု (၇) ကြိ မ်ဖြစ် ခဲ့၊ (၇) ကြိမ် လုံး ဝါေ ယာေ ရှာ့ေ ကြာင့် ဟု ဆို
မန္တလေးမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်ကနေ (၉) ရက်နေ့အထိ မီးလောင်မှု (၇) ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ ဖြစ်စဉ် အားလုံးက နေအိမ်အတွင်း ဝါယောရှော့ကတဆင့် စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်က (၁) ကြိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက် က (၁) ကြိမ်၊
အေ နာက် ကမ္ဘာသို့ ဗု ဒ္ဓ ဘာ သာ ကို ပြန့် ပွားေ စ ခဲ့ သော သူ ဗြိတိ န်နိုင် ငံ သား
ဘုန်းတော်ကြီး အရှင်အာနန္ဒာမေတ္တေယျ ဟု ကျော်ကြားခဲ့သော သူ၏ အမည်ရင်းမှာ ချားလ် (စ်) ဟင်နရီ အယ်လင်ဘင်းနက် ( Charles Henry Allan Bennett ) ဖြစ် ပါတယ်။ သူ့ကို ၁၈၇၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူမှာ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်
ဘုန်းကြီးေ ကျာင်း သစ် ဆောက် လုပ် ရန်အတွက် မြေ သန့် ရှင်း လင်း ရာ မှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြား အား တူးဖော် ရ ရှိ
ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြား အား တူးေ ဖာ် ရရှိ ၁၁. ၂. ၂၀ ၂၀ ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ကုန်းကျေးရွာ၌ နံနက် (၈)နာရီခန့်တွင် သုဓမ္မာသာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရွာသူရွာသားများမှ မြေနေရာသန့်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် အင်ကုန်းေ ကျးရွာေ န
အိမ်ေ ထာင် ရှိ တယ် ဆို တဲ့ သတ င်းေ တွ အေ ပါ် ပြ န်ဖြေ ရှင်း ခဲ့ တဲ့ နေလင်းကျော်
ချ စ် သူများနေ့ အစီအစဉ်ကိုလည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ နောက်ထပ် ရည်းစားထားဖို့ထက် အနုပညာအလုပ်တွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ချင်သေးတယ်လို့ ရင်ဖွင့်ထား ပါ တ ယ်။ Myanmar Idol Season4ကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု ရရှိလာတဲ့ အဆိုတော် နေလင်းကျော်ကတော့ လူမှုကွန်ယက်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပြန့်နေတဲ့ သတင်းနဲ့
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ပန်လင်းဆိုင်ဒေသမှာ တည်ရှိပြီးဉာဏ်တော် အမြင့်ပေ ၄၃ ပေ၊ တင် ပလ္လင်ခွေ အ ကျယ် ၃၆ ပေ ကျ ယ် ရှိကြောင်း သိ ရ ပါ တယ်။ ဒီ နှီးဘုရားကြီးကို မိုင်းဖုန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့
အသုဘ လာေ မး တဲ့ အမျိုးသမီး ကို ပူး ကပ်ပြီး ဖခင် ကို အပြော ချင် ဆုံး စ ကားေ လး တစ် ခွန်း ကို ပြော သွား ခဲ့ တဲ့ မီး ရှို့ သတ် ခံ ခဲ့ ရ သူ မလွင်မာဦး
ခင်ပွန်းဟောင်းရဲ့ မီးရှို့ ခြင်း ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ ညီ မလေး မလွင်မာဦး ဆုံး ပါး သွား ခဲ့ တာ ကိုေ တာ့ ပရိ သ တ်ကြီး သိ ရှိပြီးဖြ စ်မှာပါ ညီမလေးလွင်မာဦးကို မီးရှို့ခံခဲ့ရတာကြောင့် မီးရှို့ သဂြိုလ်တာမျိူးမလုပ်ဘဲ အုတ်ဂူသွင်း
တ ရား ခံ ထံ မှ လက် ဖက် ရည် ဖိုး ငွေတ စ် သိန်း ခွဲေ တာင်း သည့် ဒုရဲအုပ် ထောင် (၄)နှစ်ကျ
ကျပ်သိန်းရာချီ လာဘ်ယူသူများကိုလည်း ထောင်ဒဏ်သုံး၊ လေးနှစ်ပင်ချသည့်အတွက် ၎င်းအမှုသည်၏ အပြစ်ဒဏ်က များသည်ဟု ဒုရဲအုပ်ကျော်နိုင်ဦး၏ရှေ့နေက ပြောသ ည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စွပ်စွဲချက်များဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် ရဲအရာအရှိတစ်ဦးအား ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်ကျခံရန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် အမိန့်ချလိုက်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အမှတ်(၃) နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်ကျော်နိုင်ဦးသည် ၂၀၁၈
ကိုရိုနာ ဗို င်း ရပ် စ်ကြောင့် လူ ၁( ၀၀၀) ကျော်ေ သ ဆုံြး ပီးေ နာက် တရုတ် အကြီး တန်း အ ရာ ရှိ များကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်
တ ရုတ်သမ္မတ ကိုယ်ပူချိန် စစ်ဆေးမှုခံယူ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူ ၁၀၀၀ ကျော်သေဆုံးပြီးနောက် တရုတ်အကြီးတန်းအရာရှိများကို ရာထူးမှ ထုတ်ပ ယ်… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူ ၁၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့က အကြီးတန်း အစိုးရအရာရှိ အတော်များများကို ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားလိုက်ပါတ ယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပေါ်
မ သ မာ သူေ တွ ရဲ့ အမဲ ဖျက်ခြင်းေ အာက် မှာ ပျက် စီးရ တော့ မယ့် ဗုဒ္ဒ သာ သ နြာ ပုကျောင်းေ တ်ာကြီး
မ သမာသူတွေရဲ့ အမဲဖျက်ခြင်းအောက်မှာ ပျက်စီးတော့မယ့် မဟာသန္တိသုခ ဗုဒ္ဒသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီး အဆောက်အဦထဲက တန်ဘိုးရှိပရိဘော ဂတွေ… ရန် ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိတဲ့ မဟာသန္တိသုခ ဗုဒ္ဒသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးထဲက တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကို လူသူအလစ်မှာ သယ်ဖို့ ကြံစည်ထားပုံကို ၁၀.၂.၂၀၂၀ နေ့လည်မှာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တချပ်ကို တန်ကြေးသိန်းချီတဲ့ ကျွန်းတံခါးရွက်တွေ အပြင်ကိုသယ်ထုတ်ဖို့ ခြံစည်းရိုးအစပ်မှာ